Khabar Kantipur » मनकारी ट्याक्सी चालक: जसले वृद्धवृद्धा, दृष्टिविहीन र दुखीलाई पैसा लिदैनन निसुल्क पुर्याइ दिन्छन् !
मनकारी ट्याक्सी चालक: जसले वृद्धवृद्धा, दृष्टिविहीन र दुखीलाई पैसा लिदैनन निसुल्क पुर्याइ दिन्छन् !
पोखरा वृद्धाश्रमको परिसरमा ग१ज ४९०९ नम्बरको टयाक्सी टक्क अडिन्छ । टयाक्सीबाट झर्छन् दुई वृद्धवृद्धा । ड्राइभरलाई भाडा बुझाउन खोज्छन् । तर ति ड्राइभरले लिन मान्दैनन् । वृद्धाश्रमका वृद्धवृद्धा टयाक्सीको वरिपरि झुम्मिन्छन् र ड्राइभरलाई आशिष दिन थाल्छन् । ड्राइभर खुसी हुँदै त्यहाँबाट निस्कन्छन् ।